Casriyaynta iPhone a jailbroken ama iPad waa hawl u baahan in wax yar oo gaar ah. First of dhan, waa in aan soo magacawnay in qalab jailbroken laga yaabaa in aan wirelessly cusboonaynta. Nasiib wanaag idiin, qodobkan qeexi doonaa sida aad si ammaan ah u cusbooneysiin karaa qalab jailbroken aad.
Qeybta 1: dib qalab aad
Qeybta 2: Xaqiiji Power Supply iyo Network
Qeybta 3: Habka ugu wanaagsan ee ay dayactir ku iPhone a jailbroken ama iPad in macruufka 9
Qeybta 4: Talooyin fiicfiican in dayactir kooban jailbroken iPhone / iPad in macruufka 9
Dib qalab aad
Laakiin marka hore waxaad u baahan tahay gurmad qalabka our. Waxaad sidaas samayn si loo hubiyo in files oo dhan ay ammaan yihiin wax tago waa qalad inta lagu jiro update ah. Waxaa kale oo aad u muhiim ah in gurmad faylasha aad sababta oo ah habka hagaajinta ayaa lagu yaqaan in aad qalabka hab kabashada .
Waxaad dib kartaa qalab aad isticmaalaya Lugood. Haddii aad go'aansato in aad isticmaasho Lugood, wax kasta oo aad qabto oo ku saabsan qalab aad la taageeray doono ay ka mid yihiin macluumaadka amaan sida sirta ah. Sababtan awgeed, haddii aad rabtid in aad nuqul ka mid ah wax kasta, Lugood malaha waa habka ay u tagaan.
Haddii aad rabto in aad si kastaba ha ahaatee qayb ka mid ah macluumaadka aad xoojiyaa, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay si ay u isticmaalaan codsi kale oo shaqada u qabto. Mid ka mid ah ugu fiican yahay Wondershare Dr.Fone ee macruufka . Codsigan kuu ogolaaneysaa in aad si dhab ah u dooran xogta aad rabto in aad gurmad.
Xaqiiji Power Supply iyo Network
Si loo casriyeeyo qalab aad si guul leh, waxaad u baahan doontaa in lagugu xiro shabakad deggan Wi-Fi. Tani waa muhiim maxaa yeelay, waxaad la doonayo in la soo degsado software lagu jiro update iyo aad u baahan tahay xidhiidh ah oo lagu kalsoonaan karo si loo hubiyo in download la soo gabagabeeyo waqtiga.
Waxa kale oo aad u baahan awood qalab ee ay ugu yaraan 60% buuxa ka hor inta aadan isku dayin download ah. Dhab ahaantii Apple ku talinaysaa in qalab aad lagu rakibaa gelin il awoodeed oo ka hor inta aanad bilaabin habka update ah.
Hadda oo diyaar ayaan u nahay, aynu cusboonaynta in macruufka 9.
Habka ugu fiican ee ay dayactir ku iPhone a jailbroken ama iPad in macruufka 9
Haddii aad qabtid qalab ah oo la jailbroken aad isku dayayaan in ay cusboonaysiiso si macruufka 9, ay u badan tahay in aad la eegaya screen u eg mid hoose horumar badan aan.
Tani waa horrayn, sababtoo ah inta badan qalabka jailbroken isticmaala JAILBREAK casriga ah sida evasi0n iyo Pingu leeyihiin Ota naafada ah (in ka badan hawada) updates. Waxay sidaas u sameeyaan si loo hubiyo in qalabka uusan si toos ah loo soo dajiyo update ah.
Sidaas daraaddeed waxaad uun u cusbooneysiin karaa aalad aad u macruufka 9 isticmaalaya Lugood. Halkan sida.
Talaabada 1: maleeyo in aad soo bixi oo lagu rakibay nooca ugu dambeeya ee Lugood on your computer, xiro qalabka aad si aad u computer isticmaalaya fiilooyinka USB.
Talaabada 2: Riix badhanka qalab on dhankiisii ​​midig sare ka dibna riix "hubiyo updates" update la heli karo si toos ah kala soo bixi doonaa oo update on qalab aad.
Talaabada 3: Waxaad ka heli doontaa fariin popup ah aad ka warrami update ee la heli karo. Just guji "download iyo update"
Lugood idiin ka warrami in version cusub macruufka laga heli doonaa qalab aad ugu dhaqsaha badan. Waa muhiim in aad sii telefoonka la xiriira computer inkastoo habka oo idil. Geedi socodka sidoo kale qaadan kartaa waqti ka mid ah tan iyo markii files noqon karo waaweyn sida 2.1GB laakiin haddii aad ku leedahay xiriir wanaagsan waa in aanay noqon dhibaato.
Waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay in la bilaabi qalab si aad u buuxiso update ah.
Talooyin fiicfiican in dayactir kooban jailbroken iPhone / iPad in macruufka 9
Sida aynu hore u soo sheegnay, telefoonka jailbroken waa gaar ah waxoogaa yar si ay u baahan tahay in laguula dhaqmo si daryeel dheeraad ah marka lagu casriyeeyo. Halkan waxa ku jira arimo dhowr ah oo aad u baahan tahay in aad maskaxda ku hayso marka lagu casriyeeyo telefoonka jailbroken.
Waxaad u baahan tahay si loo hubiyo in xogta la taageeray, haddii aad ku talajirto in la xariirta in macruufka 9. Muhiimadda gurmad ah oo aan la iskama indho tiri karo.
Waxaad sidoo kale u baahan doonaa si loo hubiyo in telefoonkaagu uu leeyahay awood ku filan iyo in aad galaangal u leeyihiin shabakad xoog Wi-Fi.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in telefoonka jailbroken ma karaan sida kaliya ee ay sameeyaan ay tahay in ay isticmaalaan Lugood in la cusboonaysiiyaa oo sidaas daraaddeed wirelessly. Isku dayga in loo sameeyo qaab kale keeni doonaa oo kaliya in niyad.
Waxaa kaloo muhiim ah in la ogaado in lagu casriyeeyo si macruufka 9 ka dhalan kara khasaare ah oo dhan beddelka aad JAILBREAK.
Haddii aad doonaysid in aad leedahay qalab jailbroken, waxaad u baahan doontaa inaad dib oo dhan uga faaidaysan JAILBREAK aad ka dib markii update ah.
> Resource > iPhone > xalka ugu fiican jailbroken iPhone / iPad in Hagaaji in macruufka 9